Aoka izay ny ady eo amin'i Ravalomanana sy Rajoelina
jeudi, 19 novembre 2020 12:06
Tsaroanay ianao Papy heritaona lasa nandehananao
Feno herin-taona androany ny nahafatesan'i Zokibe Venance, ny Raiko, Raharimanana Roger Venance.
Mpampianatra Tantara sy sosiolojia ary mpampianatra mpikaroka teny amin'ny Oniverité izy.
Mpanao politika tao amin'ny Vonjy iray tsy mivaky. Nisedra ny tolona maro tamin'izany sehatra izany.
Anisan'ny fotokevitra nijoroany ny fampandrosoana ny faritra, ary nitaky ny fametrahana ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny rafitra federaly na ny Etat fédéral izy.
Olon'ny fihavanana i Zokibe Venance, tsy tia fanavakavahana nefa kosa nitaky ny fitovian'ny rehetra, indrindra ny faritra rehetra manerana ny Nosy amin'ny fampandrosoana ao aminy.
Rehefa tonga ny krizy 2002, dia anisan'ny nogadrain'i fitondrana Ravalomanana izy, ary izy no gadra politika voalohany, nosamborina tany Mahajanga, nopotehina ny tarehiny tamin'ny toto-basy, nofatorana toy ny akoho izy, tongotra aman-tanana nakarina tanaty fiaramanidina ka nentina taty Antananarivo.
Lako sy daroka no nataon'ireo besatroka azy tamin'izany, tsy nahatsiaro tena izy, ary tsy hitanay zanany no nisy azy.
Ny finday teny aminy no nahitan'ireo miaramila ny anaranay zanany, izay nezahina nofandrihina hisamborana anay ihany koa.
Nodorana sy noravaina avokoa ny entana rehetra tao amin'ny tranonay miisa 5 tany Mahajanga, may ny fiara rehetra, ny trano kila forehitra, nanjavona indray mipy maso ny tantara, sary, K7, sy ny fahatsiarovana rehetra fony kely ka hatramin'izay.
Nolazaina fa nitahiry basy, sy lehiben'ny mpanao barazy Zokibe Venance, izay tsy nisy akory izany, fa izy to teny tao Mahajanga ka natahorana hampitroatra ny olona amin'ny fanafihana nataon'i filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Nogadraina teny Antanimora izy ny 20 jona 2002, taona nahaterahiko no nanaterako azy teny Amponja.
Nesoriko tety an-koditro ny ankanjo mafana tety amiko, ary nentiny niditra tao am-ponja, niteny tamiko izy hoe : "Quel drôle de cadeau d'anniversaire que je t'ai donné, mais soit courageux mon fils, le pays a tant besoin de toi".
Nohafahan'ny fitsarana izy taty aoriana, fahafahana politika ihany anefa satria noterena andeha tany ivelany izy fa tsy mipetraka eto Madagasikara.
Nentina notsaboina tany Frantsa izy. Naharitra ela tao anaty coma izy noho ny ratra sy daroka nahazo azy tamin'ny loha, tratra, kibo, izay niteraka takaitra mandra-maty ho azy moa izany.
Ny zandriko mpihira, no nihira isan'andro teo aminy mandritra izy coma tsy nahatsiaro tena tany amin'ny hopitaly. Rehefa nifoha izy, dia nirainy ireo hiran'ny zandriko, henony avokoa hoy izy ireo hira niraina taminy.
Nahongan'ny Ben'ny Tanàna an'Antananarivo Andry Rajoelina ny Filoha Marc Ravalomanana ny taona 2009.
Anisan'ny nanohitra izany fomba fakana fanjakana amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana izany ny tenako, ary navaivay ny fifandonana ara-kevitra tamin'izany. Anisan'izany ireny resaka "Sans qualité" tany amin'ny Nations-Unis saika hikabary teo amin'ny fivoriam-be n'ny Firenena mikambana Andry Rajoelina, fa tsy neken'ireo firenena maro andray fitenenana.
Nilatsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena aho ny taona 2013. Resy ary nahazo isam-bato ambany tokoa, izay hilazana hatrany ny hoe ry zero virgule. Ataotsika resaka hafa iny, fa ny amintinako azy dia ny hoe, tsy nahamenatra ahy, ary vao maika aza mampirisika ahy ny mahita ireo olona maro be nifidy sy nametraka ny fitokisany tamiko hatrany anaty ala rehetra any.
Ny lesona tsoahiko dia tsangan'olona no fidian'ny Malagasy ary izay manam-bola sy fitaovana no mandresy amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy resahiko ny azakazaka samy mangala-bato.
Taorian'ny fifidianana fihodinana voalohany, dia niantso ahy ny Kandida Hery Rajaonarimampianina, nifampiresaka tamiko ihany koa ny Kandida Robinson, izay izy mirahalahy ny hiditra hifaninana amin'ny fiodinana faharoa.
Tsy naharesy lahatra ahy ny kandida Robinson, eo aloha izy hoe miaraka amin'i Marc Ravalomanana, fa ny tetikasany dia tsy nazava fa ny MAP ihany no averimberiny tanisaina, izay tsy voafehiny akory aza ilay programa.
Nanaiky ny hitondrana ny programa Vitatsika kosa i Hery Rajaonarimampianina, ka nanapa-kevitra ny hanohana azy aho sy ny mpiara-dia amiko ao amin'ny Vitatsika.
Teo no nihaonako voalohany tamin'ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina.
Nampiandreketina ahy ny fanangonana sy ny fanaovana antontanisa ny vokam-pifidianana nanohana ny kandida Hery Rajaonarimampianina.
Lany ho filoham-pirenena i Hery Rajaonarimampianina. Ny zoma no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny vokam-pifidianana ny HCC, nanao fety manokana ireo ny sabotsy, ary ny alahady izahay vao nantsoina niaraka nanao fety tao amin'ny Hôtel Colbert. Io ihany ny andro niantsoana ahy sy nahitako ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny 5 taona latsaka nitondràny, na téléphone na message, na mail tsy misy raisiny na valiany, nefa teo aloha isa-maraina miantso ahy hatrany maka hevitra amin'ny fanaovana ny tetikasa sy ny fijerena ny antontanisam-pifidianana.
Nisara-dalana taminy ihany koa Andry Rajoelina, satria dia nodakan'i Hery Rajaonarimampianina ihany koa.
Nisy ny fifanarahana vita an-tsoratra nisy vavolombelona teo amin'ny roa tonta, fa rehefa lany Hery Rajaonarimampianina dia nolaviny izany fifanarahana izany, "Izaho mbola kandida hoy izy no nanao sonia an'io, fa tsy manan-kery intsony io taratasy fifanarahana io rehefa filoham-pirenena aho".
Niantso ahy indray Andry Rajoelina, fa hiomana ho fidiana ho filoham-pirenena izy, nefa tsy mananana tetikasa. Ka dia nifanaraka izahay fa tena anova marina ary ampandroso an'ny Madagasikara no tanjona.
Ka izaho tsy hilatsaka ho kandida ho filoham-pirenena fa hanohana azy, ary hanatanteraka ny tetikasa novolavolaina raha lany izy.
Naharitra 3 taona aho sy ny ekipako no namolavola tetikasa ho an'i Andry Rajoelina. 800 pejy ny tetikasa nomena azy, ary nisy taratasy nataonay sonia miaraka hifanajana ny hanatanterahana ireo tetikasa ireo. Tsy nisy vola tambiny nanao izany tetikasa izany, fa vola nentina nanatanteraka ny asa ihany no nampiasaina. Ny tanjona dia ny ampandroso an'i Madagasikara.
Nihaona isan'andro ary tena akaiky an'i Andry Rajoelina aho tamin'izany. Tsy mbola nanery ahy hiditra amin'ny antokony kosa izy, fa nijanona hatrany nitarika ny antoko Vitatsika. Olona liam-pivoarana izy, tia mianatra, ary olona mahay mihaino ny hafa, tena raikim-po aminy ny fampandrosoana ny Firenena.
Maro ireo olana nitranga, indrindra ireo olona manodidina azy, ka voatery nisara-dalana taminy aho. Izy rahateo tsy niantso ahy rehefa nanao ilay tetikasa IEM, izay betsaka tamin'ireo tetikasa nomenay azy no narafitra ho lasa IEM.
Tsy manana olana manokana amin'ny Filoha Andry Rajoelina aho, marik'izany ny fanantonako azy niarahaba azy tao amin'ny fandaharana manokana TVM nihaonany tamin'ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Tsy nandray anjara firy tamin'ny fampielezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena 2018 aho, rehefa nanapa-kevitra ny tsy hirotsaka. Ny antony dia tsotra, ny Malagasy mbola te hanasaraka ny ady eo amin'i Ravalomanana sy Rajoelina, ary mbola ny vola no manjaka amin'ny fifidianana.
Miisa 30 mahery ny kandida teo, nisy nisafidianana tsara, betsaka no nanana tetikasa tsara, fa ny anasaraka ny adin'i Ravalomanana sy Rajoelina no nisy, samy nahazo latsaky ny 1% avokoa ny kandida rehetra. Tsy resaka tsy fisian'ny olona izany fa ny Combat Ravalomanana # Rajoelina no tiana vitaina.
Tsy ao anatin'ny tarigetrako ny fampiasam-bola hakana fahefana, izany no nahatonga ahy nanao antso ho an'ny rehetra anaovana tsipaipaika hiatrehana fifidianana, mba andraisan'ny rehetra anjara, tsy ara-bola ihany fa faharesen-dahatra ny hiaraka ampandroso ny firenena, izaho rahateo tsy te hivarotra Tanindrazana hakana vola any ivelany hamatsiana propagandy, izay ny mpanome vola no hibaiko ny asanao rehefa lany ianao.
Tsy resy lahatra ny maro, vola kely no voahangona tao anatin'ny mangarahara, naveriko ny volan'ireo izay nanome, ary natolotra ny marary teny amin'ny hopitaly kosa ny an'ireo izay tsy nety nandray ilay vola efa nomeny, izay isaoraka ho azy ireo betsaka izany.
Niantso ahy anefa ny Talen'ny fampielezan-kevitry Marc Ravalomanana fa mila fampihavanana eo amin'ny mpanao politika sy ny Malagasy izy. Na dia maro aza ireo ratra, maro ireo hevitra tsy mitovy, indrindra amin'ny lafin'ny tetikasa, dia nanaiky aho ny hiara-dalana taminy.
Niresaka tamin'ny Raiko aho talohan'izany, hoe nantsoin'i Ravalomanana, "Ataovy tsara, ary ampiasao amin'ny tsara" hatrany hoy izy ny talenta sy fahaizana anananao, raha izay no ampandroso ny Firenena ho izy dia mitsodrano anao aho.
Resy moa i Marc Ravalomanana, maro ireo mpanohana no tsy nanaiky satria feno hala-bato ilay fifidianana, saika hamerina ny 2002 aza ny maro, fa nisy sokajin'olona vitsivitsy izahay no tsy nanaiky ary niresaka tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tsy hitaritana olona an-dalam-be na hanao krizy hafa indray, ary nandresy lahatra azy ny hanekeny ny vokam-pifidianana, ary hanatrehany ny fanaovana fianihanana eny Mahamasina, izay nekeny moa izany.
Tsy marina ny filazana fa nomena sy nandray vola i Marc Ravalomanana ka nanekeny ny vokam-pifidianana. Isaorako azy izay fahandrena sy fitiavan-tanindrazana ananany izay.
Olona tena manana traikefa ary mahatakatra zavatra lavitra i Marc Ravalomanana. Manana fomba fijery avo izy amin'ny firenena, tsy ambanin-javatra aminy ny Malagasy sahirana, ny fiatrehana ny fiainana an-davan'andro, ny fampianarana. Izy rahateo antsoina hoe Ramose, tia manazava zavatra, sy mampianatra izy. Mahafantatra olona maro, indrindra ireo tompon'andraikitra ambony any ivelany, ireo mpampatsy vola.
Noraisiko toy ny fifonana ny antso marobe nataon'i Filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamiko rehefa nandre izy fa maty i Zokibe Venance.
Ny famelan-keloka hoy aho dia fanavotana ho ahy aloha, satria afaka amiko ny lonilony, eny na ny fikasana ny hamalifaty mihitsy aza, dia foana avokoa amin'ny maha olombelona mivavaka sy mino an'Andriamanitra ny tena. Atao ahoana tokoa moa ny angataka famelàna amin'i Tompo Jesoa Kristy, raha tsy hamela heloka nataon'ny hafa amin'ny tena.
Isaorako ny Filoha Andry Rajoelina ihany koa ny nanondrotany ny Raiko amin'ny Marim-pankasitrahana ambony indrindra eto amin'ny Firenena.
Tsy maharesy lahatra ahy intsony anefa ny fanaovana politika miorina amin'ny antoko politika amin'ny hanaovantsika azy ankehitriny, ny antokon'ny mpitondra manilika ny hafa, ary ny antoko mpanohitra miezaka andrirotra sy hanongana ny mpitondra, ary dia efa 13 taona izao no nisy ny adin'i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina, izay ady hidiran'ireo mpomba ny andaniny sy ny ankilany, ka zary leo ny vahoaka Malagasy amin'ny ataon'ny mpanao politika, 25% sisa no vato azon'ny Filoham-pirenena, tsy toa teny amin'izay atao.
Rahateo vao maika koa mihevitra ny mpitondra fa azy ny fahefana ka izay tiany atao no atao.
Ny teny malaza aza moa dia ny hoe "Izahay no eto, ka milatsaha amin'ny manaraka raha mandresy anay, fa izay tianay atao no atao, rehefa ianareo dia ataovy indray izay tianareo". Dia izay hatrany, mifanongana, dia mifanagadra, dia mifamotika.
Ny tetikasa nataon'ny teo aloha potehin'ny tonga aty afara, ary dia lokoiny amin'ny loko politikany hatrany ny zavatra rehetra, nefa dia volam-bahoaka no anaovany izany.
Faniriako ny hitsaharan'ny ady eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy ilana mpanelanelana izany amiko, izy mianaka olona nifandray akaiky tany aloha, ary nisy fifamatorana ankoatran'ny resaka politika, afaka mifandray sy mihaona. Milaza samy tia Tanindrazana, ka tsy hitako izay antony tsy ahafahana mampitsahatra ny ady.
Rehefa ireo no mifamela sy mifanaraka, dia ajanona ihany koa ny adin'ireo samy mpanohana, fa hifantoka amin'ny fampandrosoana ny Firenena.
Ny Filoha Andry Rajoelina no voafidy, izy no mitondra fa tsy asiana fiaraha-mitantana, fitoniana no ilaina, tsy mila manidy varavarana anefa ny mpitondra fa izay manan-kevitra dia henoana avokoa.
Omeo ny faritra ny fahefana sy ny fitaovana hampandrosoany ny faritra misy azy. Omeo ireo nianatra ny fitantanan-draharaham-pankajana, manomboka any amin'ny Fokontany, ajanony ny kinamanamana sy ny tetika politika handresena amin'ny fifidianana manaraka. Rehefa mandroso ny firenena, azo alamina ihany ny fifandimbiasam-pahefana sy fitondrana any aoriana.
Tsy adinonay ny hanatra sy ny fototra nijoroanao Papy Zokibe Venance.
Gros bisous Mamy, nous t'aimons.
(Sary Papy Baptême Patrick 1965)